बुधबारदेखि ४२ चार्टर उडान हुने, कुन देशमा कति ? हेर्नुहोस बिस्तृतमा — Imandarmedia.com
बुधबारदेखि ४२ चार्टर उडान हुने, कुन देशमा कति ? हेर्नुहोस बिस्तृतमा
काठमाडौँ । विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न सरकारले तेस्रोपटक एक साताका लागि उडान तालिका थपेको छ । बुधबारदेखि ६ वटा मुलुकबाट ४२ वटा उद्धार उडान हुँदैछन् ।
कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र(सीसीएमसी) छाउनीका अनुसार आगामी बुधबार (असार ३१) देखि सुरु हुने उद्धार उडान साउन ६ गते मंगलबारसम्म सञ्चालन हुने छ । सीसीएमसीले सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार युएईको दुबई, सारजाह र अबुधाबी, साउदी अरबको दमाम र रियाद, कुबेत, कतार, बहराइन र मेलेसियाबाट नेपाली नागरिकलाई उद्धार गरिने छ ।
सीसीएमसीले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको निर्देशक समितिले गरेको शुक्रबारको निर्णय अनुसार तालिका सार्वजनिक गरेको उल्लेख गरेको छ । सरकारले नियमित हुने व्यवसायिक उडान साउन ६ गतेसम्म रोकेको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेका अनुसार सीसीएमसीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा तेस्रोपटकको उद्धार उडान तालिका सार्वजनिक गरेको हो ।
कोभिड–१९ का कारण विभिन्न मुलुकमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार उडानमार्फत जेठ ३२ गतेदेखि थालिएको स्वदेश फर्काउने सरकारको अभियानको आज अन्तिम दिन (असार २८) हो । तेस्रो चरणको उद्धार उडान सुरु हुनअघि सरकारले दुई दिन उडान रोकेको छ । यो दुई दिन सरकारले उद्धार उडानमा भएका कमी कमजोरीमा समीक्षा गर्ने जनाएको छ ।
सीसीएमसीले ६ वटा मुलुकका १० वटा विमानस्थलबाट नेपाल वायुसेवा निगमले १६, हिमालय एयरलायन्सले १६ वटा गरी ३२ वटा उडान गर्ने अनुमति दिएको छ । त्यस्तै विदेशी वायुसेवा कम्पनी अर्न्तगत यसपटक एयर अरेबियाले २, फ्लाई–दुबईले २ र मेलेसियाको मालिन्दो एयरले ४ वटा उडान अनुमति पाएका छन् ।
यसअघि उद्धार उडानमा रहेका कतार र टर्किस एयर भने तेस्रो चरणको उद्धार उडानमा सामेल छैनन् । कतार र टर्किसले युरोप र अमेरिकामा अलपत्र परेका नेपालीलाई पहिलो र दोस्रो चरण चलेको एक महिना लामो उद्धार उडानका क्रममा नेपाल ल्याएका थिए ।
कोभिड–१९ को माहामारी रोकथाम गर्ने उदेश्य राखेर सरकारले चैत ९ गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय र चैत ११ गतेदेखि व्यवसायिक उडान रोकेको छ । पटकपटक गरी सरकारले आठौंपटकको निर्णयबाट साउन ६ सम्म उडान रोकेको हो । अहिले आन्तरिकतर्फ सीसीएमसी निर्देशक समितिको निर्णय अनुसार आन्तरिकतर्फ चार्टर उडान भइरहेका छन् ।
कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन संचालन केन्द्रले बुधबारसम्म २४ वटा मुलुक हुँदै १ सय ५९ वटा उद्धार उडानबाट कम्तिमा २६ हजार नेपाली त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै नेपाल आएको जनाएको छ । सरकारले जेठ २८ देखि उद्धार उडान सुरु गरेको थियो ।
यसैबीच सरकारले गत बिहीबारदेखि वैदशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति खुला गरेको छ । यससँगै अहिले वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालयमा रोजगारका लागि विदेश जान पुनः श्रम स्वीकृति लिनेहरुको भीडभाड देखिन थालेको छ । अहिले दैनिक ३ सयभन्दा बढीले पुनः श्रम स्वीकृति लिने गरेको वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत काठमाडौं कार्यालय ताहचलका प्रमुख उमेश बस्नेतले जानकारी दिए ।
कार्यलयमा स्वास्थ्य प्रोटोकलको मापदण्डअनुसार सेवाग्राहीका लागि लाईन बस्न २/२ मिटरको दुरी कायम हुनेगरी चिन्ह लगाइएको र सोहीअनुसार सबैजनाले दुरी कायम गरी काम भइरहेको उनले बताए ।
पुनः श्रम स्वीकृती खुलाएको बिहीबार एक साता पुगेको छ । यद्यपी बिहीबार भने वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहचलमा रोजगार व्यवस्थापन सुचना प्रणालीमा समस्या आएकाले पुनः श्रम स्वीकृतिको काम सुचारु हुन सकेन । तर शुक्रवारबाट नियमित काम भइरहेको बस्नेतले जानकारी दिए ।
बिदामा आएका, भिसा र करार अवधि भएकालाई पुनः श्रम स्वीकृति दिने गरी खुल्ला गरेसँगै शुक्रबारसम्म १ हजार ७ सय ८२ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् । पुनः श्रम स्वीकृति लिनेहरुमा १ हजार ५ सय ८६ जना पुरुष छन् भने १ सय ९६ जना महिला छन् ।
सबैभन्दा धेरै युएईमा ८ सय ७५ जनाले पुनःश्रम स्वीकृति लिएका छन् । त्यस्तै जापानका लागि २ सय ७२, कतारका लागि २ सय र मलेसियाका लागि १ सय ६८ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएको कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै बहराइन, ब्रुनाइ, जोर्डन, कुवेत, लेवनान, चीन, माल्दिभ्स, माल्टा, ओमान र पोल्याण्डका लागि पनि केही संख्यामा पुनः श्रम स्वीकृति लिइ आइरहेको बस्नेतले बताए ।
कसरी जान्छन् विदेश ?
सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम गर्न गत फागुन ३० गतेबाट श्रम स्वीकृति अनिश्चितकालीन बन्द गरेको थियो । चैत्र ११ गतेबाट मुलुक लकडाउन गरेसँगै करिब साढे ३ महिना लामो बन्दाबन्दीपछि यही असार १८ गतेबाट पुनः श्रम स्वीकृति खुलाएको हो ।
यसबीचमा नेपाल आएका तथा भिषा र करार अवधि बाँकी रहेकाहरुले श्रम स्वीकृति लिइरहेका छन् । त्यसैगरी अन्तराष्ट्रिय उडान आगामी साउन ७ गतेसम्मलाई बन्द गरिएको छ ।
अहिले पुनः श्रम स्वीकृति लिएकाहरु लकडाउनका बीच चार्टर्ड उडानमार्फत गन्तव्य मुलुक जाने गर्दछन् । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमाल दाहालले भने, ‘नियमित उडान नभएकाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएकाहरु चार्टर्ड उडानमार्फत गन्तव्य मुलुक जानेछन् ।’
वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले रोजगारी वा रोजगारदाताको प्रकृति, गन्तव्य मुलुकको हालको अवस्था, सम्बन्धित मुलुकको सरकारको आप्रवासी कामदार सम्बन्धी नीति, कोभिड १९ को प्रभाव र स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड तथा प्रावधान र सम्बन्धित जोखिम समेतको जानकारी लिनुपर्ने दाहालले बताए ।